Maqnaanshaha Kenya ee kiiska badda ma ka dhigan tahay guusha Soomaaliya? | Xaysimo
Home War Maqnaanshaha Kenya ee kiiska badda ma ka dhigan tahay guusha Soomaaliya?
Maqnaanshaha Kenya ee kiiska badda ma ka dhigan tahay guusha Soomaaliya?
Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda Adduunka ICJ ayaa shalay billowday dhagaysiga dacwadda kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya, waxaana halkaas xaadiray garabkii ka socday Soomaaliya oo kaliya.
Dhageysiga kiiskan ayaa bilaawday iyadoo Kenya ay ka maqantahay maxkamadda kuna wargelisay inay ka baxdan kiiskan, oo aanay ka qeyb-geli doonin dhageysigiisa, sida ay werisay warbaahinta gudaha ee dalkaas.
Hadaba, maxaa laga filan karaa dacwaddan? Haddii Soomaaliya oo diyaar ah aysan Kenya ka qeyb-gelin dhagaysiga kiiskan, ma ka dhigan tahay in Soomaaliya loo xukumi doono badda la isku heysto?
Dr. Axmed Cali Kheyre waa aqoonyahan shahaaddada PHD-da ka haysta sharciyada caalamiga ah, waxuu isagoo jooga Muqdisho su’aalahaas uga jawaabay wareysi uu siiyey VOA.
Dr. Axmed waxa uu sheegay in mar-marsiiyaha ay la timid Kenya uu yahay mid aad loola yaabay oo aan wax macno ah bixineyn, balse ay maxkamaddu heysato cadeymo iyo dukumiintiyo ku filan oo Kenya ay horay ugu gudbisay.
“Dacwada waa la qaadayaa oo taas waxaa dhigaya qodobka 53-aad ee xeerka maxkamadda ICJ, hadii labada dhinac uu mid imaan waayo ama kiiskaas uu ka laabto, dhinaca jooga waxuu maxkamadda ka codsan karaa in kiiskaas loo xukumo, taasna kama dhigna ‘hadii garab maqnaado garabka jooga ayaa loo xukumayaa’ balse waxaa dib loogu noqonayaa dukumiintiyadii ay horay u soo gudbisay Kenya, maxkamaduna waa ay heysataa dukumiintiyo ku filan oo dhanka Kenya ka soo gaaray,” ayuu yiri Dr. Axmed Kheyre.
Waxa intaas ku sii daray, in sida ku cad jadwalka lagu dhageysanayo kiiskan ay Soomaaliya marka hore gudbin doonto doodeeda, kadibna ay maxkamaddu dib ugu laabaneyso dukumintiyadii ay horay ugu soo gudbisay Kenya.
“Doodihii iyo Mapkii ay dhinacyadu u soo gudbiyeen ayey isku fiirneysaa markaas kadib ayey go’aan ka gaareysaa, laakiin marnaba hadii Kenya maqnaatay macnaheedu maahan Soomaaliya haloo xukumo,” ayuu yiri.
Sidoo kale Dr. Axmed waxa uu sheegay in weli Kenya loo ogolyahay inay warqado u soo gudbisato maxkamadda, isla markaana aysan Kenya aheyn dalkii ugu horeeyey oo baxa kiis noocaan oo kale ah, “Marka kiiska waa soconayaa maxkamadda si caadi ah ayey u geyleysaa kadibna go’aan ayey kasoo saareysaa,” ayuu yiri.